मनकामना माताले सबैको मानोकामना पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल श्रावण २८ गते सोमवार – Etajakhabar
मनकामना माताले सबैको मानोकामना पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल श्रावण २८ गते सोमवार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशीश्रीसूर्य दक्षिणायन,वर्षा ऋतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल श्रावण २८ गते सोमवार नेपाल सम्बत ११३८ गुंलाथ्व,सन्२०१८ अगस्त १३ तारिक शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि विहान११ वजेर १३ मिनेटसम्म,पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र राती ११ वजेर १ मिनेटसम्म, परिघयोग,कौलवकरण,आनन्दादियोग ध्वज,सूर्य कर्कट राशीमा,चन्द्रमा राती ४ वजेर ४४ मिनेटसम्म सिंह उप्रान्त कन्या राशीमा । ॐः–राहुकालः–विहान७÷१२ वजेबाट८÷५१ वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः– विहान१०÷३० वजेबाट मध्यान्ह १२÷८ वजेसम्म रहनेछ,दूरमुहूर्तः– मध्यान्ह १२÷३५ वजेबाट अपरान्ह१÷२७ वजेसम्म र ३÷१३ वजेबाट ४÷५ वजेसम्म रहनेछ,यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷४२ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३५ वजेसम्म रहनेछ । गुली कालः–अपरान्ह१÷४७ वजेबाट ३÷२६वजेसम्म रहनेछ,यो सामान्य मानिन्छ ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः७÷११ वजेसम्म अमृत वेला,७÷११वजेदेखि ८÷५० वजेसम्म कालवेला,८÷५० देखि १०÷२८ वजेसम्म शुभवेला,१०÷२८ देखि १२÷७ वजेसम्म रोगवेला,१२÷७ देखि १÷४६वजेसम्म उद्वेग वेला,१÷४६ देखि ३÷२५ वजेसम्म चरवेला,३÷२५ देखि ५÷४ वजेसम्म लाभवेला र ५÷४ वजे देखि सूर्यास्तसम्म अमृतवेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ८÷४ वजेसम्म चरवेला,८÷४ वजेदेखि ९÷२५ वजेसम्म रोगवेला,९÷२५ देखि १०÷४७ वजेसम्म कालवेला,१०÷४७ देखि १२÷८ वजेसम्म लाभवेला,१२÷८ देखि१÷३० वजेसम्म उद्वेगवेला,१÷३० देखि २÷५१वजेसम्म शुभ वेला,२÷५१वजे देखि ४÷१२ वजेसम्म अमृतर ४÷१२ वजे देखि सूर्योदयसम्म चर वेला रहनेछ ।
अस्थिरताले अनिष्ट निम्त्याउने छ । हतारमा निर्णय नगर्नु होला । आफ्नो निर्णयले अरुलाई फाइदा पुग्न सक्छ । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसर कम प्राप्त हुनेछ ।
धेरै विश्वासमा नपर्नु होला । समयमा काम गर्न गाह्रो पर्ला । काम गरेर आलोचना सहनु पर्ला । अहार विहारमा ध्यान दिन नसके स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । घरयासी खर्च बढ्नेछ । व्यापारमा मन्दि आउनेछ ।
दिन सामान्यतया अनुकुल देखिन्छ । कार्य क्षमता घट्ने छैन । उद्योग धन्दा बन्द व्यापारबाट आय आर्जन बढ्ने छ । कुनै काम गर्नु छ भने समयलाई पूर्ण उपयोग गर्नु होला, ढिलो गर्दा आफैलाई घाटा हुनेछ ।
दिन त्यति अनुकुल देखिदैन । आफ्नो कुरा सकेसम्म अरुलाई नफुत्काउनु होला । आर्थिक कारोवार गर्दा चनाखो हुनु होला । कसैलाई धन दिनु भनेको गुमाउनु भन्ने सम्झनु होला । व्यापारबाट मुनाफा लिन सकिने छैन ।
शारीरिक एवं मानसिक रुपमा काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । अरुका कुरालाई लिएर समय खेर नफाल्नु होला । भोज भतेरको अवसर प्राप्त हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
समयले साथ दिएको देखिदैन,जबरजस्ति कुनै काममा हात नहाल्नु होला क्षति हुन सक्छ । व्यापार व्यवसायबाट हानी नोक्सानी उठाउनु पर्ला । अनावस्यक खर्च बढ्नेछ । विवादित काममा हात नहाल्नु होला ।
कुनै काम गर्नु छ भने साच्ने काम नगर्नु होला । आज गरेका प्राय काम सफल हुनेछन् । व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ अवसर आउन सक्छ । परिवारबाट सहयोग पाईनेछ ।
भाग्यले साथ दिदा अधुरा रहेका धेरै काम बन्ने छन् । काम गरेर नाम कमाउने मात्र होईन दाम कमाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । गएका ठाँउमा मान सम्मान पाईनेछ ।
अनावस्यक विषय बस्तुमा टाउको नदुखाउनु होला । आफ्ना काम धेरै अधुरा रहन सक्छन् । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । आस्था र विश्वास भने बढ्नेछ ।
आफ्नो धन अरुका लागि खर्च गर्नु पर्ला । दैनिक काममा गतिरोध आउन सक्छ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । आवेगमा आएर काम नगर्नु होला । अहार विहार नमिल्दा स्वास्थ्य कमजोर हुनेछ ।
काममा ढिला सुस्ति नगर्नु होला । सामान्यतया आज गरेका काम सफल हुने छन् । स्वतन्त्र व्यापार व्यवसाय बाट मुनाफा लिन सकिनेछ । मिलेर गरेका काममा विवाद पर्न सक्छ । यात्राको सम्भावना देखिन्छ ।
अन्योलमा नपरि काम गर्नु होला । मेहनतका साथ गरेका काम सफल हुनेछन् । गरेका कामबाट धेर थोर लाभ लिन सकिने छ । पढाई लेखाईतिर कम ध्यान जानेछ । विरोधीको बक्रदृष्टि पर्ने होला काम गर्दा सजग रहनुहोला ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २७, २०७५ समय: २२:५४:४५
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र ११ गते सोमबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र १० गते आइतबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल चैत्र ९ गते देखि १५ गतेसम्मको
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र ९ गते शनिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र ८ गते शुक्रबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र ७ गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
आज होलिमा यी राशि हुनेहरुलाई लाभै-लाभ मिल्ने ! २०७५ साल चैत्र ६ गते बुधबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र ४ गते सोमबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल चैत्र २ गते देखि ८ गतेसम्मको